कुराकानी – Page 12 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
४ आश्विन २०७७, आईतवार ०१:१३ English
जातीय होईन, भाषा र सस्कृतिको आधारमा संघीयता भएमात्रै दिगो हुन्छ २ जेष्ठ २०६९, मंगलवार ०८:३५
सहमति एकैचोटी बाहिर आउँछ १३ बैशाख २०६९, बुधबार १७:५८
ईश्वर पोखरेल, महासचिव नेकपा एमाले ० अहिले भएका सहमति उधारो, एकोहोरो अथवा के हो ? – उधारो, एकहोरो केही होइन । सहमति नगरी अगाडि बढ्न सकिन्न । अगाडि बढ्ने सिलसिलामा सबै राजनीतिक दलहरु आप्mनो पूर्व अडान र मान्यताहरु हुँदा हुँदै पनि सहमतिको साझा भूमि निर्माण गर्नुपर्छ । नयाँ संविधान भनेको..
आजभोलि नै संविधानको खाका आउँदैछ १३ बैशाख २०६९, बुधबार १७:५६
राजेन्द्र महतो, नेता मधेशी मोर्चा ० कुन कुन विषयमा सहमति भयो ? – सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ । आजभोलिमै संविधानको खाका तयार हुन्छ । ० विवादित पाँचवटै मुद्दामा सहमति हुन्छ ? – सबै मुद्दामा सहमति नबनी कसरी संविधान बन्छ ? ० शासकीय स्वरुपमा कसरी सहमति गर्दै हुनुहुन्छ ? – यो विषयमा सबैको..
सबैको माग नै समवृद्ध नेपालको पहिचान हो ६ बैशाख २०६९, बुधबार १६:२१
भीम रावल, नेता एमाले ० तपाईं खुशीकि बेखुशी हुनुहुन्छ ? – शान्ति निर्माणमा भएका प्रगतिहरु बेखुशी हुने प्रश्नै भएन । ० धेरै खुशी हुनुहुन्छ ? – धेरै र थोरैका कुरा भएन । यी कुरा राम्रा हुन् । तर संविधान घोषणापछि हुने खुशी अहिले आइसकेको छैन । ० हिजोको विशेष समितिले के निर्णय ग¥र्यो ? – छनोट..
राज्य पुनर्संरचना मात्र जटिल विषय हो ४ बैशाख २०६९, सोमबार ११:३५
युवराज ज्ञवाली, सचिव नेकपा एमाले ० सहमति खोज्न नेतालाई रिर्सोट नै चाहिने ? – होइन एकान्तमा ठण्डा दिमागले टेनसनबाट मुक्त भएर विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ । ० टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ? – त्यो सम्भावना बढेको छ । ० कसरी ? – विषय जटिल छ, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपको बारेमा..
गाँठो बाँधेर राख्नुहोस जेठ १४ अघि कांगे्रस नेतृत्वको सरकार ३ बैशाख २०६९, आईतवार ११:२५
डा. मिनेन्द्र रिजाल, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांगे्रस ० समायोजन प्रकृया सबैमा सहमति बनेको हो ? – सहमति भयो, स्वेक्षिक अवकासको प्रकृया सुरु भइसकेको छ । त्यो आजभोलिमै सकिन्छ । पर्सीदेखि विशेष समितिले तोकेको स्थानमा लडाकूहरुलाई पठाएर समायोजनको प्रकृया आरम्भ गर्न सकिन्छ । ० यो प्रकृया..
शान्ति सम्झौता र संविधान उल्लंघनलाई बोल्ड निर्णय भन्ने ? ३० चैत्र २०६८, बिहीबार ११:४८
देव गुरुङ, नेकपा माओवादी बैद्य पक्ष नेता ० शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्ने भयो नि ? – शान्ति प्रकृया भनेको संविधान निर्माणलागयत १० वटा प्याकेजको कुरा हो । वृहद शान्ति सम्झौताले उल्लेख गरेको १० बुँदे प्याकेज हो । त्यो १० बुँदे सम्झौता एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो भने शान्ति..
उत्तर दक्षिण संघीयता नै उचित देखिन्छ २८ चैत्र २०६८, मंगलवार १६:०९
झलनाथ खनाल, अध्यक्ष नेकपा एमाले ० तपाई जनतास“गको टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, किन ? – यतिबेला जनमत र राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै हिड्नुपर्छ भन्ने मान्यताकासथ मैले यो अभियानको सुरुवात गरेको हु । जनमतलाई छोडेर हिड्ने राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई अग्रगामी दिशातिर लैजादैन । जनमत के..
नेपालको संविधान दिल्लीमै बनेको पुष्टि भयो २३ चैत्र २०६८, बिहीबार १२:३६
पम्फा भुसाल, माओवादी नेतृ ० शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्ने भयो नि तपाईंहरुको विरोधले केही लछारेन ? – शान्ति प्रकृया के हुन्छ, भविष्यले निर्धारण गर्ला । जनमुक्ति सेनाको विघटन र विर्सजन सकियो अब । ० तपाईंहरुको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ? – शान्ति सम्मानजनक होस् किनकि शान्तिका..
संविधान बनेन भने राष्ट्रपतिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ २३ चैत्र २०६८, बिहीबार १२:२६
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष मधेशी जनअधिकार फोरम ० शान्ति प्रकृया अघि बढ्ने भयो होइन ? – शान्ति प्रकृया अघि बढ्नै पर्छ । ढिलो भइरहेको छ, त्यसले गर्दा नोक्सान भइरहेको छ । ० चैत ३० भित्र माओवादी शिविर खाली हुनेभयो ? – सरकार बनेको ४५ दिनभित्रै सम्पन्न गर्नु भनेको काम गरेन, त्यसपछि सात बुँदे, चार..
अब आउँछ संविधान: प्रोफेसर एवम् नेपालविज्ञ -एसडी मुनी २२ चैत्र २०६८, बुधबार १९:३४
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नयाँदिल्लीका प्रोफेसर एवम् नेपालविज्ञ एसडी मुनी नेपालमा सङ्घीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएको हेर्न चाहन्छन् । शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताको वातावरण बन्दै गएकाले जेठ १४ भित्रै नेपालले नयाँ संविधान पाउने कुरामा उनी ढुक्क छन् । प्रमुख दलका..
प्रतिवेदनका सकरात्मक कुरालाई लिन सकिन्छ १९ चैत्र २०६८, आईतवार १२:३२
नरहरि आचार्य, नेता नेपाली कांगे्रस ० राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन संसदमा छलफल भयो, यसले के संकेत ग¥र्यो ? – दुई वर्ष अगाडि समितिको प्रतिवेदनमा पनि छलफल भएको थियो । त्यो चाहिँ प्रस्ताव हो, आयोगले तयार पारेको चाहिँ सुझाव हो । छलफल हुँदा केही परिवर्तन देखिएको छ । यसले पार्टीहरुमा..
बैद्यजीहरुको विरोधले फाइदै भएको छ १९ चैत्र २०६८, आईतवार १२:२९
टोपबहादुर रायमाझी, स्थानीय विकास मन्त्री ० बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा कांगे्रस सरकारमा जाने भयो अरे नि ? – त्यसको अर्को विकल्पै छैन । कांगे्रस, एमालेलगायतका पार्टीहरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जानुहुन्छ । ० राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जाने आधार तयार भयो ? – आधार बन्दै जान्छ, त्यस..
सरकार ढाल्ने काम कांगे्रसको प्राथमिकतामा पर्दैन १४ चैत्र २०६८, मंगलवार ०९:५५
महमद आफतव आलाम, कांगे्रस नेता ० राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा कसरी छलफल भइरहेको छ ? – आयोगको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत भएको अवस्था छ । त्यसमा छलफल जारी छ । ० कसकसले के भने ? – संविधानसभामा जति पनि पार्टीहरु छन्, ती पार्टीका प्रतिनिधिहरुले आआप्mनो धारणा राख्ने काम सुरु भएको छ ।..
महासचिव मुन नेपाल नआएर राम्रो गरे ९ चैत्र २०६८, बिहीबार १०:४९
प्रकाशचन्द्र लोहनी, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी ० वानकी मुनको भ्रमण के कारणले स्थगित भयो होला ? – माओवादीले शान्ति सम्झौता स्प्रिटअनुसार लैजान नसकेको कारणले अथवा लग्न नचाहेको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा महासचिव मुनको भ्रमण उपयुक्त नभएको कारण रोकिएको जस्तो लाग्छ ।..
बैद्य पक्ष शान्ति र संविधान विरोधी हुन् ५ चैत्र २०६८, आईतवार ०९:५८
हरिबोल गजुरेल, नेता नेकपा एमाओवादी ० बैद्य पक्षले सरकार ढाल्न सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गर्ने अरे नि ? – बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरुले नै धोबीघाटमा निर्णय गर्नुभयो, अध्यक्षलाई दबाब दिनुभयो । उहाँहरुले नै बनाउन दबाब दिएको सरकारलाई आफै गिराउनु हुन्छ भने..